Ahoana ny fampiasana Amazon Marketing Services mba hampitombo ny tombony azonao?
Raha mivarotra ny vokatrao amin'ny Amazon ianao, ny tanjonao voalohany dia ny manolotra ny zavatra eo anoloan'ny ankamaroan'ny mpanjifa anao, ary amin'ny farany dia miteraka fidiram-bola bebe kokoa. Ny algorithm ofisialin'i Amazonia rehetra dia natao hamelana ny mpividy amin'ny valiny fikarohana marina indrindra arakaraka ny safidiny sy ny tantaran'ny fikarohana. Noho izany, ny zavatra rehetra ilainao dia ny hanaraka ny toro lalana Amazon mba hampiseho ny vokatrao eo anoloan'ny mpihaino anao.
Na inona na inona tetikadinao amin'izao fotoana izao, dia tsy mampaninona ny mieritreritra ny safidinao. Soa ihany, Amazon dia manome mpivarotra karazan'asa maro izay afaka manatsara ny fivarotana varotra ary avy eo dia mitondra vola bebe kokoa ho an'i Amazon - casino online free bonus no deposit. Ny programa Amazon Marketing Services dia safidy tonga lafatra ho an'ny mpivarotra Amazon izay mitady ireo fahafahana hampitombo ny varotra ary hampitombo ny vola miditra amin'ny orinasa.
Na dia izany aza dia mitombo ny fanontaniana raha toa ka mila manandrana ny tolotra vaovao momba ny varotra vaovao ianao na manohy mampiasa ny fomba ambaranao. Fa raha toa ny tetikasam-pivarotana vaovao hipoitra tsaratsara kokoa? Noho izany, heveriko fa mendrika hanandramana ny fivarotana Amazon-n'ny Amazon mba hijanonana ao amin'ny TOP E-commerce amin'ny E-varotra Amazon. Noho izany, andeha isika hiresaka momba ny fiantraikan'ny AMS mba hahalalany raha mendrika ny fampiasam-bola izany na tsia.
Amazon Marketing Services: ny fitsipika miasa
Amazon Marketing Services (AMS) dia sehatra dokam-barotra isam-bolana izay ahafahan'ny mpivarotra mahazo ny vokatra eo anoloan'ireo mpihaino tarihina mifototra amin'ny teny fikarohana, vokatra, preferences, ary tantara ara-barotra.
Ny programa Amazon Marketing Services dia manome ireto fahafahana manaraka ireto ho an'ny orinasa:
dokambarotra amin'ny vokatra;
Fikarohana fikarohana lohateny;
Rantsana vokarin'ny dokambarotra.
Tamin'ny fandaharana AMS voalohany dia azon'ireo mpaninjara Amazon fotsiny. Na izany aza, niova ireo fitsipika, ary amin'izao fotoana izao koa dia azo atao ny mamoaka mivantana ny tompon'ny kaonty sy ny solontenan'ny mpivarotra. Na izany aza, tokony lazaina fa ireo mpivarotra izay liana amin'ny Amazon Marketing Services dia tokony ho mpandray anjara amin'ny sehatra Amazon Vendor Central. Ireo tolotra dokam-barotra ireo dia noforonina mba hanomezana vahana sy fanentanana amin'ny teny baikon'ny mpitandro filaminana ho an'ireo mpivarotra Amazon. Amazon dia mampiasa tahiry goavam-be mba hifanaraka amin'ireo mpividy miaraka amin'ny dokam-barotra izay inoany fa hifanaraka amin'ny mpivarotra. Amazon dia nanangona ny angon-drakitra tamin'ny traikefa tamin'ny alakamisy niaraka tamin'i Amazonia ary nitady ny fomba hitadiavan'ny mpivady zavatra amin'ny sehatra. Noho izany, raisina an-tsoratra ireo lafiny rehetra ireo, azonao atao ny mijery ny dokam-barotra eo anoloan'ireo mpanjifanao mety aminao izay liana amin'ny vokatra toy ny anao.
Afaka mitantana ny fanentanana dokam-barotra ianao amin'ny alàlan'ny interface internet amin'ny Amazon Marketing Services. Ity interface ity dia ahafahanao manara-maso ny fidiranao sy ny vidin'ny kliota mba hahafahanao mamaly mora foana ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola. Ankoatra izany, azonao atao ny manara-maso ny vidin'ny dokam-barotra momba ny fivarotana ary manamarina raha mahasoa na tsia ny fampielezan-tsarinao.
Na izany aza, ity programa Amazon ity dia manana ny tsy fahombiazany ihany koa. Ny interface an'ny AMS dia tsy mora ampiasaina. Tsy afaka hamafa dokam-barotra efa tapaka ianao. Ambonin'izany, ny fanavaozana ny tatitra dia matetika miadana.